शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन प्रयोग विहिन - Hamrokhotang
Home » News » शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन प्रयोग विहिन
शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन प्रयोग विहिन
By: HamroKhotang.com on Friday, August 12, 2016 /
खोटाङ, २८ साउन । जिल्लामा निर्माण गरिएका शैक्षिक तालिम केन्द्र ‘ख’ को भवन प्रयोग विहिन भएको छ । दिक्तेल नगरपालिका–९ मुडेमा निर्माण गरिएका भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएदेखि नै प्रयोग विहिन भएको हो ।
मुडेमा निर्माण गरिएका भवन सदरमुकाम दिक्तेलबाट अपायक ठाउँमा भएकाले प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको केन्द्रका वरिष्ठ प्रशिक्षक विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । “केही व्यक्तिको स्वार्थमा मुडेमा भवन निर्माण गरिएको रहेछ ।” उहाँले भन्नुभयो, “भवन आवश्यक भएपनि अपायक ठाउँमा निर्माण गरिएकाले प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो ।”
जिल्लाका मावि तथा निमाविका शिक्षकहरुलाई पेशागत क्षमता विकास तालिम, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन तालिम, विद्यालय व्यवस्थापन, निरन्तर विद्यार्थी मुल्याङ्कन, कार्यमुलक अनुसन्धान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तालिम, विज्ञान शिक्षा परियोजना, माध्यमिक शिक्षा एकाई तालिम लगायत तालिम सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गरिएको थियो । इन्दे्रणी निर्माण सेवा कम्पनीले ३३ लाखको लागतमा वि.सं. २०६७ सालमा उक्त भवन निर्माण गरेको हो ।
निर्माण कार्य सम्पन्न भएलगत्तै वि.सं. २०६७ वैशाख र असोजमा दुईवटा तालिम सञ्चालन गरिएको भवन त्यसयता प्रयोग विहिन बनेको केन्द्रले जनाएको छ । भवन प्रयोग विहिन भएपछि दुई तले भवनका ११ कोठा र कोठाभित्रका सबै फर्निचरका सामानहरु समेत काम नलाग्ने भएका छन् ।
शैक्षिक तालिम केन्द्र सदरमुकाम दिक्तेलस्थित सरस्वति उच्च माविको जग्गामा निर्माण गएिको महिला छात्रावास भवनमा सञ्चालनमा छ । उक्त महिला छात्रावास भवनमा कार्यालयको दैनिक कार्य सम्पादन गर्न समस्या रहेको केन्द्रका निमित्त प्रमुख चित्रबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
अहिले जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयसमेत केही व्यक्तिको स्वार्थमा अपायक ठाउँमा निर्माण भइरहेको सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बताएका छन् । शैक्षिक तालिम केन्द्रसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय लगायत अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयहरु सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा निर्माण भएको उनीहरुको आरोप छ ।